Iyo Blossom Hotel Houston Inozivisa Kudyidzana neThe Infinite |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » USA » Iyo Blossom Hotel Houston Inozivisa Kudyidzana neThe Infinite
mufananidzo nerubatsiro rweblossomhouston.com
Houston's Newest Luxury Hotel Inobatanidza Mauto neVirtual Reality Studio paSawyer Yards Kupa Ultimate Space Rwendo Pakati peHotera Kuvhurwa Kukuru.
Blossom Hotel Houston, iyo nyowani yeumbozha pfuma muHouston, inofara kuzivisa kudyidzana nayo Asingagumi kupa vaenzi chiitiko chinonyudza, chekunze-chenyika ino muSpace City.
Iri kuwanikwa kubhuka izvozvi, kusvika Kukadzi 20, 2022, pasuru iyi yakasarudzika ine mutengo wehotera weUS$299, kusanganisira kugara kwehusiku humwe, matikiti maviri eThe Infinite, uye zvinwiwa zviviri zvakafemerwa zvenzvimbo zvinochengeterwa nechikwata chezvinwiwa chehotera. Pamusoro pezvo, gumi ekutanga kubhuka zuva nezuva pakati pazvino naKukadzi 10, 20, achanakidzwa nepasuru neUS$2022 chete.
"Isu tingadai tisina kukumbira shamwari iri nani yevaenzi," akadaro Charlie Wang, CEO weBlossom Hotel Houston. "Hatisi kungowanikwa muSpace City chete, asi pfungwa yehotera, kubva pakushongedza kusvika kune yeruvara rwemavara kuenda kune-zviitwa zvezvinhu, yakafemerwa nemwedzi, zvichiita kuti kudyidzana kwedu neThe Infinite kuve kwakaringana."
"Tinofara kuve muHouston zvichitevera mutambo wemwedzi mina wakaitwa muMontreal kwatakagamuchirwa zvakanaka," akadaro Éric Albert, CEO uye maneja mukuru wePHI Studio. "Maguta ose eHouston neBlossom Hotel akaita zvine musoro maererano neruzivo rwekupayona rwatinopa, uye tinotarisira kushanda nechikwata cheBlossom kugadzira chiitiko chisingakanganwike kune vashanyi vanonyora The Infinite package."
Ihotera ine nhurikidzwa gumi nenhanhatu muSpace City ine makamuri makumi maviri nenhanhatu asingapute evaenzi anozvitutumadza maonerwo eguta uye ese akashongedzerwa neWi-Fi inokwana, yepamusoro-yepamusoro-soro Samsung Smart TVs, Dyson hairdryers, Nespresso coffeemakers, Digital Newspapers. nePressReader® uye dzimba dzekugezera dzemarble dzine misoro yemvura inonaya uye zvega zveAqua Di Parma™ zvinowanika. Vaenzi vanogonawo kunakidzwa mune zvakawanda zvezvivakwa, kusanganisira dziva rekushambira repamusoro pedenga remba rine panoramic maonero enzvimbo yakatenderedza Houston cityscape, nzvimbo-ye-ye-art fitness centre, maresitorendi maviri anotungamirirwa neMichelin-nyeredzi chef Ho Chee Boon uye. Akira Back, imba yekutandarira uye nzvimbo dzezviitiko. Yakagadzirwa neRongyi Creative Company, Blossom Hotel Houston inobatanidza zvinhu zvakafemerwa nemwedzi mudhizaini uye yakaunganidzwa mifananidzo yemifananidzo, ichigadzira nzvimbo ine runyararo apo vashanyi vanogona kuwana zororo kubva kuhupenyu hweguta hunokurumidza mukati menzvimbo inonyudza.
Inowanikwa paSawyer Yards mumoyo weHouston, Iyo Infinite inopa vashanyi rwendo rwunonakidza rwakafemerwa neNASA mishoni inotakura vashanyi kuburikidza nemaminetsi makumi matanhatu inonyudza chaiyo chaiyo uye augmented chaiyo dhizaini kuInternational Space Station uye kumashure, iyo yakangoitika. pachangu ne60 vazivi vemuchadenga. Ichi chiitiko chakasiyana chinobvumira vashanyi kuti vapupure epic adventure yevachadenga uye kunzwa kukura kwenzvimbo padivi pevaongorori ava. Vaenzi vachawana mifananidzo isati yamboonekwa yakatorwa nevazivi vemuchadenga yefirimu rakahwina Mubairo wa250 Emmy, "Space Explorers: The ISS Experience," iro rakakura kwazvo rakambotorwa muchadenga. Chikwata chisingaperi chinoona hutano nekuchengetedzeka kwevaenzi vese nekuita kwekuchengetedza kwakawanda uye hutsanana matanho ekudzivirira vashanyi, mhuri uye vashandi kubva kuCOVID-2021 paPasi uye mu orbit.
Kuti udzidze zvakawanda kana kubhuka iyi yakasarudzika, nzvimbo-yakafemerwa pasuru, vashanyi vanogona kushanyira zvinongedzo pazasi:
Grand yekuvhura package $299
Kuvhurwa kukuru kwakakosha $199
Dzimwe nhau nezve Blossom Hotel Houston
Covid-19 hotera Houston International Space Station Montreal NASA ushamwari
The St. Regis San Francisco Inogadza Christopher Williams seMutungamiriri weRestaurant Operations